ဂေဇက်မှ အသံ ကုမုဒြာတွင်ပျံ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဂေဇက်မှ အသံ ကုမုဒြာတွင်ပျံ့
ဂေဇက်မှ အသံ ကုမုဒြာတွင်ပျံ့
Posted by Khaing Khaing on Jul 10, 2012 in News | 31 comments
ဒီနေ့ထွက်တဲ့ ကုမုဒြာဂျာနယ်လေးကို ၀ယ်ဖတ်မိတော့ အထဲကစာသားများ ပုံများကိုကျွန်မမြင်ဖူးသလို ကြားဖူးသလို ဖြစ်မိတယ် ဒါနဲ့မန်းလေးအကြောင်းဆိုတော့ လေးပေါက်ကိုပဲ ပြေးသတိရမယ် ဟုတ်ပါတယ် လေးပေါက်ရဲ့ http://myanmargazette.net/135172/travel/photography-pictures-galleries-wallpapers-photo-tips ပို့စ်ထဲက စာသားလေးတွေပါ….
ကျွန်မရဲ့ မနေ့ကဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်တာပြောပြဦးပါမယ် ကျွန်မတို့ရုံးမှာ လစဉ်ကုမ္ပဏီနံမည်ကြော်ငြာပါတဲ့စာစောင်ကို လက်ခံရရှိပါတယ် …. ဘယ်တော့မှ ကျွန်မယူဖတ်လေ့မရှိပါဘူး အခြားDepartment က အမက စာစောင်ကိုအိမ်ကို ယူသွားပါတယ် အပြန်ကားပေါ်မှာ သင်္ဘောသားအကြောင်းပါတော့ ကျွန်မလည်းစိတ်ဝင်စားတော့ တောင်းဖတ်မိတယ် … တစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက်ဖတ်လာတာ ကျွန်မကုမ္ပဏီနံမည်ကြော်ငြာပါတဲ့ စာရွက်ရောက်တော့ အရှေ့ကိုလှန်ကြည့်မိတယ် အမဒီစာစောင်ဘယ်က၀ယ်တာလဲ ညီမတို့ Department ကစာစောင်နဲ့တူတယ်နော်လို့ပြောမှ အားလုံးက၀ိုင်းဟားတာကိုခံရတယ် …… ကျွန်မရဲ့စာပေလေ့လာမှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုအားနည်းချက်တွေက အဲလိုပါ ….. ခုတော့ ဘာပဲပြောပြော သံချေးတက်နေတဲ့ ဦးနှောက်က အခုမန်းဂေဇက်ကြောင့် အလုပ်လုပ်နေပါပီ ……
ရွာထဲကလူတွေကလည်း တကယ့်ကို လေးစားဂုဏ်ယူထိုက်သူတွေပါ သတင်းထောက်လခမရ သတင်းထောက်ဒါ့ပုံဆရာတွေ အစစ်မဟုတ်ပေမယ့် တကယ့်ကိုပရိုတွေပါ ရွက်ပုန်းသီးဆိုပိုမှန်မှာပါ အခုလို ထင်ရှားသူတွေနဲ့ ခင်ရ မင်ရ မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာ အရမ်းကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ် …………. လေးပေါက်ရဲ့သတင်းလေးကတော့ …………
စာမူခ က ၁သောင်းကျပ်တဲ့ဗျို့ ။
သဂျီးကလဲ အားကျလို့ တဲ့ ၊ သူရွေးတဲ့ စာမူဆိုရင် တစ်ပုဒ် ကို နှစ်သောင်းကျပ် ပေးဖို့ စီစဉ်နေပြီ ဆိုကလားဘဲ။
ကိုပေါက် ကိုတော့ ဘီယာတိုက်ခိုင်းရမယ်။
တကယ်လား ကိုပေ ……. သွားချီးက သူရွေးတဲ့စာမူကို နှစ်သောင်းပေး မယ်ဆိုတာ …… တကယ်တော့ စာရေးဝါသနာပါတဲ့သူတွေက စာတပုဒ်ဖြစ်ဖို့ နှလုံးသွေးနဲ့ဦးနှောက်ကို ရင်းပီး ရေးခဲ့ရတာပါ …… တစ်ခါတစ်ရံကော်မန့်ပေးသူတွေကလည်း ပို့စ်တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပေမယ် ကော်မန့်ကိုတော့ အထွေအထူးမပေးဖြစ်တာတွေရှိတတ်ပါ …… ကော်မန့်ရှည်တဲ့သူတွေကလည်း သူတို့အတွေ့အကြုံကို ဦးနှောက်လေးသုံးပီးရေးထားတာပါ …..
စာမူတစ်စောင်က တစ်သောင်းနှစ်သောင်းမကတန်ပါတယ် ……..
ရေးသားနိုင်တဲ့ ကိုပေါက် ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်…
ထပ်ဆင့် ကြော်ငြာပေးတဲ့ ခိုင်ခိုင်ကိုလဲ အားပေးပါတယ်နော်…
မအိရဲ့ အက်ဗာတာပုံက မအိနဲ့တူတယ်နော် ……
လောက်ပေးက သူ့စာတွေ စာစောင်တွေထဲ ပါနေတာကြာလှပြီ။ ကိုယ်တောင် သတိမထားမိဘူး။ နောက်ပိုင်း ဖတ်မိမှသာ သိတာ။ လေးပေါက်ကလည်း မပြောဘူးရယ်။ မုန့်ဝယ်ကျွေးရမှာ ကြောက်လို့လား မသိဘူး။
အမပု မပူနဲ့ လောက်ပေးမကျွေးလည်း သမီးကျွေးမယ် ……… အမပုသာအားအောင်လုပ်ထား သမီးလာခဲ့မယ် ဟဲဟဲ …
မခိုင်ရေ .. ဂျာနယ်တွေတော့… တကူးတကကြီးမဖတ်ဖြစ်တာမို့ အခုလိုဖတ်ပြီးတင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ …။
လေးပေါက်ရေ …. ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်နော် …. ။
၀ါသနာကိုအရင်းတည်ပြီး .. အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာလိုင်းဘက် ကူးပြောင်းနိုင်ပါစေ . …. ။
အမကတော့ဝယ်မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး …. ဒီနေ့မှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရုံးကိုလာတဲ့ အစ်ကိုကြီးဆီက တောင်းဖတ်မိတော့ အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရတာပါ ….. မခိုင်လည်း ဂျာနယ်ဝတ်မဖတ်သလို အချိန်မရှိတော့ မဖတ်ဖြစ်ဘူး တစ်ခါတစ်လေ အားမှသာဖတ်ဖြစ်တာ သူများတွေပြောတဲ့သတင်းတွေ မန်းဂေဇက်ကသတင်းတွေကိုပဲနားထောင်ဖတ်မိတယ် ………
ဟယ် အဲလို ဆရာကြီး တွေရှိနေတာ ကိုး ဝင်ပြီး လက်ဆော့ ဝင်မန့်တာတွေ အမှားပါရင် ဆောရီးပါဗျာ။
နောက်ပြီး ဒီထဲ ကရွာသူရွာသားတွေ အတွက် အရေးအသား မကောင်းရင် ဝင်ပြီးတော့ မန့် ပြီး သင်ပြပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကိုသုဝေ ……. ညီမကဒီပို့စ်လေးတင်တာ ကိုယ့်ရွာထဲကလူတွေက ဒီလိုနေရာရတယ် ဆိုတာလေးကို ၀မ်းသာဂုဏ်ယူလွန်းလို့တင်မိတာပါ ….. ကုမုဒြာ ဂျာနယ်ဆိုတာကလည်း မြန်မာပြည်မှာ နံမည်ကြီးနံမည်ရနေတဲ့ ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ် … ရွာသူရွာသားတွေက အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်နားလည်တတ်ပါတယ် ….. အရင်လိုပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆက်လက်မန့်ပါရေးသားပေးပါ ……….
မှတ်မှတ်ရရ ဒီဆောင်းပါးလေးက ကျနော်ရဲ့ ရာပြည့် ပုံနှိပ်စာမူလေးပါဘဲ။
2010ခုနှစ်ကစပြီး မန်းလေးတိုင်းဂျာနယ်၊ရှိတ်ဂျာနယ် နဲ့အခု2012မှာ မြနန္ဒာဂျာနယ်မှာ
အားလုံးသောစာမူများက မန်းလေးဂေဇက်မှာ ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
အခုဒီဆောင်းပါးလေးကိုလည်း ကုမုဒြာဂျာနယ် မန်းလေးရုံးက အယ်ဒီတာ ဆရာကျော်ရင်မြင့်ထံ
တိုင်းပြည်အနှံ့ရောက်တဲ့ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရတဲ့အတွက် ရော မန်းလေးဂေဇက်ကျနော်တို့ရွာအတွက်ပါဝမ်းသာပါတယ်။
ကျနော်ပုံနှိပ်ဖော်ပြခံရတဲ့စာမူများကို ပိုစ်တစ်ခုအဖြစ် တင်ပေးပါမည်။
ကောင်းပါတယ်လေးပေါက် ……. အားလုံးတစ်စုတစ်စည်းထဲတင်ပေးတော့ မသိတဲ့သူတွေ ရွာသူ ရွာသားသစ်တွေအတွက်ပိုကောင်းတာပေ့ါ ………မျှော်နေမယ်နော် …. သမီးမအားတဲ့နေ့တော့ မတင်နဲ့နော် သမီးက ထိပ်ဆုံးကနေရာဦးချင်တာ ရွာသူရွာသားအားလုံးရဲ့ပို့စ်တွေကိုလေ …. တင်မယ်ဆိုရင်သမီးကို လက်တို့နော် …….
ကြိုတင် ဘွတ်ကင် လုပ်ထားရပါလိမ့်မယ် ..
ဘွတ်ကင် လက်မှတ်တွေကိုတော့ ..
ပေါက်ဖော် ဘီအီးဆိုင်၊ ဖရဲ အလှပြင်ဆိုင်နဲ့ မစ္စတာပေရဲ့ ဘူးကုမ္ပဏီတို့မှာ
ရယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ ..
သူများတွေ ပြောသလိုပဲ ..
သားသားကိုလည်း မုန့်ဝယ်ကျွေးရမယ်ဂျာ ……
လေးလေးပေါက်ရေ့ (ဖားပီးခေါ်တဲ့အသံ )
ဘီဘီလေးနဲ့ မြီးရှည်လေးနဲ့ ဝါးတီးဖွင့်ကြစို့
ဥဥ သများအတွက်ပါပိုစားထားပေးပါ …….
ကလောင်စွမ်းထက်တဲ့ လေးပေါက်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ
လေးပေါက်အတွက် အများကြီး ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ…
ဒီနေ့တော့ ဂုဏ်ယူစရာတွေပဲ တွေ့နေရတာ ..
ဂေဇက်ကြီး ပြန်လည်စည်ကားလာသလိုပဲနော် …..
မခိုင်ရေ .. ဂျာနယ်တွေတော့… တကူးတကကြီးမဖတ်ဖြစ်တာမို့ အခုလိုဖတ်ပြီးတင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ …
အဲဒီ စာမူ က ရာပြည့် ပုံနှိပ် ဖော်ပြမှု စာမူ ဆို တော့ ကျနော် လဲ မနေနိုင်တော့ ပဲ ၀မ်းသာအားရ ဂုဏ်ယူ ရပါကြောင်း မန့် ပါရစေ နော်။
Congratulation ပါ ကိုပေါက်(မန္တလေး) ရေ။
ကံချည်းပဲလည်း ဘယ်ဟုတ်မလဲ လေးပေါက်ရေ
ကံ၊ ညဏ်၊ ၀ရိယ အားလုံး စိုက်ထုတ်ပါမှ
အဲဒါတွေ အားလုံးပြည့်စုံလို့ လေးပေါက်လက်ရာလေးတွေ ဖြစ်လာတာပါ..
လေးလေးပေါက် ဂုဏ်ယူပါတယ်နော် တို့လေးလေးပေါက် ကတော်တယ် ဓာတ်ပုံမှာလည်းဆရာတစ်ဆူထဲမှာ ပါတယ်။။။
ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်ပါတယ်လေးပေါက်ရေ……….ခုလိုဒီသတင်းကိုဖော်ပြပေးတဲ့ မခိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးပါ။
ဒီထက်မကစာကောင်းပေကောင်းတွေဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ …… ဆုမွန်ကောင်းတောင်လျှက် …….
လေးပေါက်ရေ …… နီနေတာကိုတော့ လိုက်မဖြီတော့ဘူးနော် ……. အချိန်ကုန်လို့ ……..
လေးပေါက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ၀မ်းလည်းသာတယ်။ မခိုင်ခိုင်ကျေးကျေးပါနော်။
အပုဒ် 100 ပြည့်အတွက် Congratulation ပါလေးပေါက်ရေ …. နောက်ထပ် နောက်ထပ် မြောက်များစွာသော ဆောင်းပါးတွေ ရေးသားနိုင်ပါစေလို့ ….
လေးပေါက်လို စာမူတွေ အများကြီး မဟုတ်ပဲ
တစ်စောင်လောက် ဖော်ပြခံရဖူးရင်တောင် သေမလောက်ပျော်မိမှာအမှန်ပဲ
အခိုင့်ပို့စ်မှာလေးပေါက်ကို ဂုဏ်ပြုပေးသူတွေဖြစ်တဲ့ mamanoyar နှင်ဆီငုံ shwe kyi သားဦးမြေးဦး မေဖလားဝါး စနှိုးလေး ကိုရွာစားကျော် laypai ဦးကြီးမိုက် မရွှေအိ မမေဂျုလိုင် ကိုရင်မောင် ကိုကြီးအံချာတုံး အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ ……
ညီမကတော့ ကိုယ့်ရွာသူရွာသားတွေ ဘယ်သူမဆို အခုလိုထင်ပေါ်တာကို အရမ်းဂုဏ်ယူတယ် ….. ကိုယ်မန်ဘာဝင်ထားတဲ့ဆိုဒ်က ဒီလိုထင်ရှားသူတွေရှိတာ လူတိုင်းသိစေချင်လို့ဖော်ပြပေးခဲ့တာပါ …….